Panna d'Or: Lionel Messi Oo Loo Badinayo Inuu Ku Guuleysto Abaal-marinta Aanad Waligaa Maqal & Shuruudda Looga Baahan Yahay Xiddiga Ku Guuleysanaya - Gool24.Net
Panna d’Or: Lionel Messi Oo Loo Badinayo Inuu Ku Guuleysto Abaal-marinta Aanad Waligaa Maqal & Shuruudda Looga Baahan Yahay Xiddiga Ku Guuleysanaya
Way yar yihiin dadka maqlay ‘Panna d’Or’, sababtoo ah ma jirto inta badan cid hadal haysa amaba ururisa xogta oo ciyaartoyda ku abaalmarisa waqabadkooda.
Lionel Messi waxa uu iska yeeshay abaal-marinaha Ballon d’Or oo uu ku guuleystay lix sannadood, waxaana kusoo xiga Cristiano Ronaldo oo shan mar haysta.
Marka laga yimaaddo abaal-marintan caanka ah ee dadku wada yaqaanaan, miyaad la socotaa ‘Panna d’Or’? Waxay u badan tahay in jawaabtu noqonayso Maya, se Shabakadda Gool24 ayaa jawaabta kuu haysa.
Panna d’Or, waa abaal-marinta ciyaartoyda tirada ugu badan kubadda ka saara labada lugood ee ciyaartoy kale dhexdooda ‘tuunaydh/ Nutmegs’, waxaana sannadkan tobanka kaalmood ee sare isku eryanayay toban ciyaartoy oo kala duwan oo qaarkood caan yihiin, kuwo kalena maqalkooduba kugu yar yahay.
Dhamaadka bishan ayaa la si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bixinta abaal-marinta Panna d’Or/Golden Nutmeg, waxaana la guddoonsiin doonaa ciyaaryahannada tirada ugu badan kubadda ka dhex saara labada lugood ee xiddigaha ay garoomada ku xafiiltamaan.
Lionel Messi ayaa kaalinta lixaad kaga jira ciyaartoyda tobanka ah ee ugu tuunaydka badan, waxaana kaliya uu laba fursadood ka dambeeyaa xiddiga Atalanta ee Alejandro ‘Papu’ Gomez iyo Jesus Corona oo min 12 haysta.
Laakiin Lionel Messi oo ay kooxdiisu ciyaarayso tartanka Champions League, waxa kaliya uu u baahan yahay inuu laba jeer kubadda ka dhex saaro ciyaartoy kasoo horjeeda ka hor inta aanu dhamaan xili ciyaareedku, waxaanu markaas noqon doonaa xiddiga gacanta laga saarayo.
Halkan kaga bogo 10ka ciyaartoy ee ugu horreeya tartanka ‘Panna d’Or’:
=9. Angelo Fulgini (Angers & France) – 8 nutmegs
=9. Angel Di Maria (Paris Saint-Germain & Argentina) – 8 nutmegs
8. Juraj Kucka (Parma & Slovakia) – 9 nutmegs
Halkan ka daawo wacdarihii Lionel Messi iyo xiddigihii uu soo ceebeeyey: